Shabaab oo markale lagu jebiyay deegaanka Bacaadweyne, xilli ay weerareen | Dhacdo
Home Wararka Maanta Shabaab oo markale lagu jebiyay deegaanka Bacaadweyne, xilli ay weerareen
Shabaab oo markale lagu jebiyay deegaanka Bacaadweyne, xilli ay weerareen
Dagaal dhawr saacadood qaatay oo hubka noocyadiisa kala duwana leesku adeegsaday ayaa maanta ka dhacay deegaanka Bacaadweyne ee Gobolka Mudug.
Dagaalka ayaa bilowday, ka dib markii maleeshiyada Al Shabaab ay weerar madaafiic ah ku soo qaadeen deegaanka Bacaadweyne, xilli ay ku sugnaayeen masuuliyiin ay ka mid yihiin Senator Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid) iyo Gudoomiye Kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka Galmudug, Cabdullaahi Xirsi Maxamed.
Mid ka mida dadka deegaanka oo hadlay Dhacdo.com ayaa ka sheekeeyay sida ay wax u dhaceen, waxaana uu yiri “Labadii duhurnimo ayay hoobiyaha bilowdeen, Senator Cabdi Qaybdiid, Gudoomiye Kuxigeenka 1aad ee Baarlamaamka Galmudug iyo masuuliyiin kale ayaa markaas magaalada yimid. Iyadoo qadadii loo fadhiyo, loona ballansanaa in bulshada lagula hadlo bartamaha magaalada ayay nimankii hoobiyaha soo tuureen. Cid wax ku noqotay ma jirto, marka laga reebo burbur ka soo gaaray Dugsi Qur’aan.”
“Ileen markaas nimankii duulaan ayayba soo ahaayeen. Ciidamada oo garabsanaya dadka deegaanka ayaa ku baxay meeshii hoobiyaha laga soo tuuray, wax yar markii ay sii socdeen ayay nimankii indhaha isa saareen, dagaal culus ayaana meesha ka bilowday.”
“Dagaalka bilowgiisii horeba nimankii waa lagu jebiyay gadaal ayayna u carareen, illaa afka hore ee Cammaara laga gaarayay nimankii waala baacsanayay. Cammaara oo illaa 9km u jirta Bacaadweyne waxaa fariisin ku leh Shabaab, kuwii meesha joogay ayaa dagaalka ku soo biiray, markale ayuu dagaalkii laba lixaadsaday, dagaal aan waxba leeska reeban baa meesha ka dhacay.”
“Waxaan idin xaqiijinaya in dagaalka xoogiisa uu ka dhacay aagga Cammaara oo waa leesku gabal dhacsaday, illaa Cishihii caawana xabadda way socotay, wixii ka dambeeyayna dhaawacyadii ayaa la kala gurtay.”
“Ciidamada Galmudug iyo dadka deegaanka waxaa dagaalka kaga dhintay sagaal qof, lix dadka deegaanka ah iyo saddex askari, dhaawacana waa afar iyo toban qof. Dhanka Shabaabka dhimashada soddon nin way ka badan tahay, dhaawacana warkiisaba haba sheegin. Cid kale iska dhaaf aniga ayaaba kor tagay in ka badan soddon meydadkooda ah. Meydadkoodu waxay daadsan yihiin duleedyada Cammaara.”
Dhanka kale warsaxaafadeed caawa ka soo baxay Wasaaradda Amniga Galmudug ayaa lagu yiri “Galmudug waxa ka qodan khabuuraha Khawaarijta.”
Waa markii labaad oo maleeshiyada Al Shabaab lagu jebiyo dagaal ay ku qaadeen Bacaadweyne, muddo laba bil gudahood. Dagaalkii ugu dambeeyay oo maleeshiyaad fara-badan looga laayayna waxaa uu dhacay 30-kii bishii November.
Previous articleJubbaland oo sheegtay in la baarayo dhacdadii uu ku dhintay Cawil Buluq
Next articleSomaliya oo Kenya ku eedeysay in jabhaddii soo hubeysay weerareen Beled Xaawo